नेपाल आज | २०७७ असार २३ गतेको राशीफल
२०७७ असार २३ गतेको राशीफल
भाग्य मेरो पक्षमा छ ? , के उसले मलाई कल गर्ने छ ? , के म सफल हुनेछु ? हामीले कम्तीमा एकपटक आज के हुन्छ भनेर जान्न खोज्छौँ । राशी क्यालेन्डरको १२ चिन्हमा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मीनको विशिष्ट प्रतिभा हुन्छ जसले व्यक्तिलाई परिभाषित गर्दछ । के तपाईं बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईंको लागि दिनको भण्डारमा के छ भनेर जान्न मन हुँदैन ? त्यसोभए ती नतीजाहरू आज तपाईंको पक्षमा हुनेछन् कि भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस् ।
सामान्यः दिनले तपाईंलाई त्यस्ता परिस्थितिहरूको साथ प्रस्तुत गर्दछ, जसले तपाईंलाई सोच्न र काममा खुशी प्रदान गर्दछ । ध्यान अभ्यास गर्नाले तपाईलाई खुशी र शान्त महसुस हुन्छ ।
कार्यक्षेत्रः नयाँ रोजगारीका उद्गारहरूले तपार्ईं रमाउनुहुनेछ । तपाईंले अनुकूल काम गर्ने वातावरणको आनन्द लिनुहुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो साथीलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न इमानदार हुनुहुनेछ । यसले तपाईंको साथीलाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ ।
स्वास्थ्यः तपाईको मानसिक साहस र दृढ संकल्पले तपाईलाई राम्रो स्वास्थ्यको आनन्द लिन दिनेछ ।
सामान्यः आजको दिन रमाईलो चीजहरूको आनन्द लिन उपयुक्त हुँदैन । तपाईं बिस्तारै लाभहरूको मजा लिनुहुनेछ र दिनको लागि धेरै परिणामहरू आशा गर्न सक्नुहुन्न ।
कार्यक्षेत्रः आज तपाईंको अतिरिक्त काममा दबाब हुने सम्भावना छ । तपाईंको काम गर्ने तरिकाको योजना बनाउनुहोस् र तदनुसार प्रदर्शन गर्नुहोस् ।
प्रेम र सम्बन्धः सन्तुलित र हास्यपूर्ण दृष्टिकोणले तपाईंको पार्टनरलाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ ।
स्वास्थ्यः तपाईंले आफ्नो आमाको स्वास्थ्यको लागि खर्चको गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
सामान्यः आजको दिनमा तपाइँले धैर्य र एक सजीलो मनोवृत्ति राख्नुपर्छ । लाभदायक परिणामहरू हेर्नको लागि तपाईंले आफूलाई आध्यात्मिक गतिविधिहरूमा समर्पण गर्नुपर्दछ ।
कार्यक्षेत्रः कामको दबाव अधिक हुने सम्भावनो छ । कुनै पनि कार्य गर्नु भन्दा अगाडि योजना बनाउँदा तपाईंले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रेम र सम्बन्धः घरेलु मुद्दाहरूको बारेमा फरक मत तपाईंको पार्टनरसँग मिल्नेछ। यसले दिनको सम्बन्धमा सद्भाव र आकर्षणलाई असर गर्दछ
स्वास्थ्यः राम्रो स्वास्थ्य सम्भव नहुन सक्छ । तपाईंले आफ्नो आँखा र दाँत जाँच गर्नुपर्छ ।.
सामान्यः दिनले तपाईँलाई प्रगतिशील परिणाम दिनेछ । एक आशावादी दृष्टिकोण मार्फत तपाईं न्यूनतम प्रयासको साथ आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुनुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न अवसर प्रदान गरिनेछ । तपाईका सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले प्रशंसा प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग मैत्री सम्बन्ध साझेदारी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । यसले तपाइँ र तपाइँको पार्टनरलाई आनन्द र खुशीको राम्रो भावना प्रदान गर्दछ ।
स्वास्थ्यः तपाईं राम्रो र स्थिर स्वास्थ्य कायम राख्नुहुनेछ ।
सामान्यः दिनले फलदायी परिणामहरू उत्पादन गर्दैन । तपाईले आफ्ना लक्ष्यहरूसँग अगाडि बढ्न कम हिम्मत र दृढ संकल्प देख्नुहुनेछ । जे होस्, तपाईले हंसमुख मनोवृत्ति राख्नु पर्छ । छोटो यात्रा र परिवर्तन दिन को लागी सम्भव हुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः कामको दबावका कारण हुने त्रुटिहरूलाई वेवास्ता गर्नबाट बच्न र कामको राम्रो योजना बनाउन आवश्यक छ ।
प्रेम र सम्बन्धः असुरक्षा को भावना को कारण, तपाइँ आफ्नो साथीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम हुनुहुने छैन । आफ्नो साथीसँग राम्रो समझका लागि तपाईको मनोवृत्तिमा परिपक्व हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्यः तपाईंको खुट्टामा दुखाइ हुन सक्ने सम्भावना छ ।
सामान्यः तपाईं दिनको लागि विवेकी हुनुपर्दछ र तपाईंसँग राम्रो परिणामहरू हेर्न चीजहरूको सही समझ हुनुपर्दछ । तपाईंले आफ्नो शब्दहरूसँग सावधान हुनु आवश्यक छ, किनकि तपाईं लापरवाह भई सम्झौताको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ ।
कार्यक्षेत्रःसमयमै कार्यको समाप्ति सम्भव हुनेछैन । तपाईंले सावधानी अपनाउनु पर्छ रे कार्यहरू सञ्चालन गर्न दिमागको उपस्थिति लागू गर्न आवश्यक छ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंले गम्भीर मनोवृत्ति हटाउन र तपाईंको साथीसँग हिंड्दा केहि चीजहरू सिक्न आवश्यक छ । तपाईं आफ्नो खुशी आफ्नो साथीलाई देखाउनुहुनेछ।
स्वास्थ्यः तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । तर पनि आप्mनो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न आवश्यक छ ।
सामान्यः आजको दिन तपाई साहसी हुनुपर्दछ र शान्तिपूर्ण नतिजा सुरक्षित गर्न कटिबद्ध हुनुपर्दछ । सकारात्मक विचारहरू सोच्दै, तपाईं आफ्नो विश्वास पुनर्निर्माण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः कडा कामको तालिकाले तपाईंलाई धेरै व्यस्त राख्छ । कार्यमा त्रुटिहरू हुने भएकोले तपाईंले आफ्नो काम गर्दा अझ राम्ररी ध्यान दिनुपर्नेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंको साथीसँग अनावश्यक बहसहरूमा प्रवेश गर्ने सम्भाव्यता छ ।
स्वास्थ्यः तनावले ढाड दुख्न सक्छ ।
सामान्यः यो एक सुन्दर दिन हुनेछ जहाँ तपाईं खुशी र भरोसायोग्य हुनुहुनेछ । महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनको लागि यो आदर्श दिन हुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाई द्रुत ढंगले चुनौतीपूर्ण कार्यहरू पूर्ण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । यो कार्यको प्रभावकारी र व्यवस्थित योजनाको कारण सम्भव हुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंले आफ्नो पार्टनरसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुहुनेछ । तपाईंको पार्टनरले तपाईंको दृष्टि मार्फत तपाईंमा विश्वास बढाउनेछ ।
स्वास्थ्यः उर्जा स्तरको कारण तपाईको स्वास्थ्य राम्रोे हुने सम्भावना छ ।.
सामान्यः दिन को लागी तपाइँ धैर्य र आशावादी हुनु पर्छ । तपाईंले आफ्ना भावनाहरू नियन्त्रण गर्नै पर्छ । आफैलाई आशावादी राख्दै, तपाईं सफल परिणामहरू देख्नुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंले सावधानीपूर्वक आफ्नो काम गर्न केही आरामको त्याग गर्नुपर्नेछ । तपाईं आफ्नो वरिष्ठको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईले आफ्नो पार्टनरप्रति तपाईको चित्त नबुझेका भावनाहरु देखाउनुहुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईं उचित निद्रा र छाला सम्बन्धी समस्याहरूबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ ।
सामान्यः दिनले तपाईंलाई सुस्त र अनावश्यक मानसिक भ्रमको साथ पाउनेछ । सकारात्मक सोच्दै, तपाईले अझ राम्रा परिणामहरू देख्नुहुनेछ ।
कार्यक्षेत्रः काममा अतिरिक्त दबाव देखिने छ । तपाईं आफ्नो वरिष्ठबाट मान्यता प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई नराम्रो व्यवहार देखाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दा सम्बन्धमा बेचैनि ल्याउन सक्छ ।
स्वास्थ्यः तपाईंले आफ्नो आँखाको ख्याल गर्नुपर्छ । तपाईंको आँखामा समस्या हुन सक्छ .।
सामान्यः तपाईं राम्रो अवसरहरूको मजा लिन सक्नुहुन्न । थुप्रै अवसरहरू गुमाएपछि तपाईंलाई यसले दिक्क पार्न सक्छ ।
कार्यक्षेत्रः उचित योजना र एकाग्रताका साथ तपाई त्रुटि बिना काम गर्न सक्नुहुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईंले आफ्नो पार्टनरप्रति संवेदनशीलताका भावनाहरू देखाउनुहुनेछ । यदि तपाइँ मैत्री मनोवृत्ति राख्नुहुन्छ भने तपाइँको पार्टनरँंग राम्रो सम्बन्ध हुनेछ ।
स्वास्थ्यः स्वास्थ्य मध्यम हुनेछ । चिसो र खोकीको सम्भावना हुन्छ ।.
सामान्यः यो अर्थपूर्ण दिन हुनेछ जहाँ तपाइँ तपाइँका चाहनाहरू पूरा गर्ने राम्रो मौकाको मजा लिनुहुनेछ । लिइएको प्रमुख निर्णयहरूले लाभदायक नतिजा ल्याउनेछ ।
कार्यक्षेत्रः तपाईंको कामको वातावरण अनुकूल हुनेछ । तपाईं आफ्नो कामको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट हुनुहुनेछ ।
प्रेम र सम्बन्धः तपाईं सहज र सजिलो तरीकाले तपाईंको पार्टनरसँग राम्रो समझदारी राख्न सक्नुहुनेछ ।
स्वास्थ्यः तपाईंले दिनको लागि राम्रो स्वास्थ्यको आनन्द लिनुहुनेछ ।
२०७७ साल असार २७ गतेको राशीफल
२०७७ श्रावण २६ गतेको राशीफल